China Kids Pu Raincoat ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | Senlai
1. Otu n’ime ngwaahịa anyị bụ PU raincoat, nke a na-ebupụ na mba Nordic, Oceania na mpaghara ndị ọzọ.PU raincoats na-ekewa ndị okenye na ndị na-eto eto. Aremụaka na-eyi uwe mmiri na-ezo n'otu uwe na otu. Enwere ndị nke gbara agba na nke dị gịrịgịrị.
2. Njirimara nke akwa ajị anụ ahụ dịkwa oke mkpa. Mgbe usoro nhazi, ihe ederede doro anya, ezigbo agbanwe agbanwe, ọ dịghị mfe ime pilling, ntutu isi na ihe ndị ọzọ.General mgbe ọgwụgwọ pụrụ iche, ajị anụ ahụ nwere ike ịnwe mgbochi -static, ire ọkụ retardant na ndị ọzọ e ji mara, na-eme nchekwa nke ákwà nke ukwuu mma. Shake ajị anụ nwere ike agwakọta ya na ihe ọ bụla ákwà, a arụmọrụ pụrụ ukwuu mma ya kwes na ndị ọzọ function.The shake shake aji ajị anụ na-adị nnọọ nro. Na mgbakwunye, ọ nwere ike ịme usoro dị iche iche dịka mkpa dị iche iche nke ndị mmadụ n'otu n'otu.
3. Agba nwere ike ịbụ ọgaranya na yi, na ọ bụ ihe eke na ezigbo. The mkpa version ka nke PU na isi ákwà. Enwere ike ime akwa isi nke onye na-ebubata ya nke onye ahịa kwuru.
4. E nwere ụdị suut abụọ, otu bụ jaket na suspenders, nke ọzọ bụ jaket na akwa ogologo.Brace ogologo ọkpa bụ iji ụzọ braces buckle ga-enwe na-agbanwe nkwado roba mgbọrọgwụ ike na ubu ebe ahu mmadu, Uwe ọkpa ahụ dị larịị na-eji ọnọdụ n'úkwù maka mgbọrọgwụ roba na-agbanwe agbanwe, otu agbanwe ahụ.
5. Thezọ mmechi nke mkpuchi ahụ na ọnụ ụkwụ ka na-ejikarị mkpọchi agba, nke nwere ike iji mmiri mee ihe niile iji hụ na ọrụ uwe na oge mmiri ozuzo na oge mmiri.
6. Uru nke akwa PU bụ: nke kachasị nke eriri eriri dị elu, nke nwere akpụkpọ anụ yiri nke ahụ; N'otu oge ahụ, ịdị arọ dị nfe, ike siri ike, ume iku ume, mmiri na-adịghị, adịghị mfe ịgbasa na nchedo gburugburu ebe obibi, ezigbo anụ ahụ, nguzogide iji gbagọọ agbagọ, ịdị nro, ike ikuku ọkụ, na ikuku ikuku.
Nke gara aga: Akpa Ihi ụra
Osote: Skmụaka Skisuit
Clemụaka Clear Raincoat
Longmụaka Long Raincoat
Schoolmụaka School Raincoat